यि १० काम गर्नुहुन्छ भने तपाँर्इको मृगौला बिग्रिने खतरा एकदमै ज्यादा छ । – Online Khabar 24
यि १० काम गर्नुहुन्छ भने तपाँर्इको मृगौला बिग्रिने खतरा एकदमै ज्यादा छ ।
October 3, 2021 October 3, 2021 by admin admin
किड्नी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो ।
यसले शरीरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र उत्पादन गर्ने, टक्सिन अर्थात खराव पदार्थहरुलाई शरीरबाट निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम गर्छ ।
४ गुलियो खाने बानी : यदि गुलिया खानेकुरा धेरै बानी छ भने आजै देखि छोड्नुस् । गुलियो बढी खाँदा यसले शरीरमा प्रोटीनको मात्रा बढी भएर मृगौलामा समस्या हुन्छ ।५ पोषणको अभाव : शरीरमा पोषक तत्वको अभाव भो भने मृगौला खराव हुन्छ । भिटामिन-ट र म्याग्नेशियम भरपुर खानाले मृगौलामा पत्थरी हुन दिँदैन ।
७.अनिद्रा :रातिमा निद्रा नलाग्ने वा धेरै जागा बस्ने बानी पनि मृगौलाका लागि घातक छ । यसले मृगौला सम्बन्धि विभिन्न रोग ल्याउन सक्छ । निद्राले मृगौलालाई स्वस्थ राख्न सघाउँछ ।८ चिया कफी बढी सेवन :चिया कफी अत्याधिक मात्रामा पिउँदा पनि मृगौलामा समस्या हुन्छ । चिया कफीले शरीरमा क्याफिनको मात्रा बढाउँछ जसले मृगौलामा भार पर्छ ।
९ पेनकिलर सेवन :टाउको दुख्ने वित्तिकै वा सामान्य दुखाइ कम गर्न पनि गोली खाने बानी छ भने आजै देखि छोड्नुस् । धेरै पेनकिलरको सेवनले तपाइँको मृगौलामा प्रभाव पार्छ ।१० जाँड रक्सी : अल्कोहल अर्थात जाँड रक्सीको अत्याधिक सेवनले पनि मृगौला समस्यामा पर्छ । यसले मृगौला फेल हुने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ । साभार गरियको खबर
Prevचिसो पदार्थ पिउने गर्नु हुन्छ ? पिएकाे एक घन्टा पछि शरिरमा यस्तो हुन थाल्छ ! जान्नुहाेस्
nextनक्कली भनेर किनेकाे हिराको औंठीले ३० वर्षपछि बनायो यसरी करोडपति !